Weerarada argagixisada been abuurka ah ee London, Manchester, Paris, Barcelona iyo Rotterdam ee 23 iyo 24 October? (UPDATE)): Martin Vrijland
Weerarada argagixisada been abuurka ah ee London, Manchester, Paris, Barcelona iyo Rotterdam ee 23 iyo 24 October? (DHAMMAAN)
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 22 Oktoobar 2019	• 37 Comments
Maanta waxaa la i siiyay fiidiyow kaas oo Ole Dammegard uu saadaaliyay calanka beenta ah (Ingiriis: calanka beenta ah) weerarada argagixiso ee London, Manchester, Paris, Barcelona iyo Rotterdam ee 23 iyo 24 October (Cusboonaysii xagga hoose ee maqaalka). Waxaan ku tilmaamay Ole Dammegard, oo ah af deenishka door bidida mihnada saxaafadda, inuu yahay mucaarad la xakameeyay oo lagu soo qoray qodobbadii hore. Tan macnaheedu waa inuu u badan yahay inuu daaha ka qaado runta si uu ugu guuleysto dhibcaha oo uu ugu noqdo shabakad badbaado awoodda xukunka. Jeelasha la xakameeyo ayaa sidaas darteed mararka qaarkood wax u muujin kara waxyaabo. Dabcan waan qaldami karaa, laakiin tuhunkeygu waa Dammegard inuu yahay nin la xakameeyo.
Wuxuu hore u difaacay nin hore uga soo shaqeeyey warbaahinta kale ee la yiraahdo Zen Gardner. Waxaa soo baxday in Zen Gardner (ka dib markii uu sanado badan ku caan baxay warbaahinta kale) uu la xiriiri karo dariiqa carruurta Eebbe. Gudaha maqaalkani en maqaalkani Waxaan sharraxay sida ragga kale ee warbaahinta hore ay markasta u helaan taageero, ka dibna ay u quustaan ​​markabka. Mid ka mid ah ayaa si lama filaan ah isu rogay inuu xubin ka noqdo cibaado sharaf u leh carruurta isla markaana kan kale iskiis isku dila isagoo ku sii daaya raadiyaha (oo uusan mar dambe sii noolaan doonin). Baro qodobbadaas si aad u ogaatid sida ciyaarta ciyaarta mucaaradka loo xukumo loo ciyaaro.
Dammegard wuxuu ku saleeyaa macluumaadkiisa weerarada argaggixiso ee dhow (sida ku qoran ereyadiisa) oo ku saabasan la socodka xogta qaar sanado socda. Kama caawin karo laakiin fahanka ah in la siinayo macluumaadka. Sida aan ka warqabo, tani waxay ka dhigan tahay inaan hore u leenahay mid amniga net netman markii la bilaabay, taasi wixii weerar ah ka dib kuwa runta doonaya waxay qabsan karaan hal mar. Ka dib oo dhan, waa geesi mar hore saadaaliyay dhan.
Sida aan ka warqabo, sidaa darteed ma aha inaan la yaabno in weeraradaas (calanka beenta ah) ay runtii imaan doonaan. Ka dib markaa waxaan ka heli doonnaa 'beel run ah' oo cusub oo bulshada runta ahi waxay noqon doontaa gebi ahaanba jeebka adeegyada, sababta oo ah waxay hore u soo saareen weeraryahankooda lagu kalsoonaan karo (Ole Dammegard) goor hore. Tani waa sida ciyaarta mucaaradka la xakameeyay loo ciyaaray sannado badan, waana sida ay noqon doonto waqtigan.
Ole wuxuu ku salayn doonaa macluumaadkiisa xog ka socota shirkad la yiraahdo Crisis Solutions (rikicin-solutions.com). Caloosha hoose waxay sheegaysaa inuu ka helo macluumaadkiisa isla adeegyadan xakameynaya hawlgallada calanka beenta ah.
Dammegard wuxuu saadaaliyay berrito iyo maalinta ku xigta weerarada 39 ee shanta magaalo ee aan soo sheegnay. Howlgalkii calanka beenta ahaa (oo lagu dhawaaqay dhaqdhaqaaq argagixiso) xitaa waa la magacaabi lahaa. Waxay qusaysaa hawlgalka "Sea Eagle".
Intaa waxaa sii dheer, waxaa jiri lahaa layli la xiriira musiibo ka dhacday warshad tamarta nukliyeerka ee waqooyiga Sweden, oo Dammegard sidoo kale laga shakisan yahay inuu noqon doono weerar argagixiso calan been abuur ah. Naftaada u arag sida Dammegard uu ugu sharaxay si qurux badan wareysiga hoose isagoo ah madaxa warbaahinta kale. Anigu kuma aaminsani ninka, laakiin waxaan sharxay in hoos ku xusan labada xiriiriye web ee aan soo sheegnay iyo waxa aan kor ku soo xusnay.
Haddii runtii maahan jimicsi argaggixiso oo keliya, laakiin weerarada dhabta ah (calanka beenta ah) ayaa la raacayaa, markaa waxaad sidoo kale ku heli kartaa saameyn ka soo horjeedda, taas oo ah in adeegyadu dhihi doonaan kanaalada sida Ole Dammegard iyo warbaahinta kale ee ay ku eedeeyaan in ururada argagaxisadu ay la socdaan layliyada sidaa daraadeedna ay u adeegsadaan xaalada jimicsi si ay u fuliyaan weeraro dhab ah maalmahaas. Marka la soo koobo: waa si hufan kuwa (la xakameeyo) warbaahinta kale ee lagu eedeeyo khaladaadka waana mida ugu wanaagsan in si joogto ah looga tirtiro wax kasta oo aan warbaahinta guud laga marin internetka. Saxaafadda kale ayaa markaa ah, ka dib oo dhan, kuwa iyagu inay ahayd inay soo saaraan dhammaan noocyada laylisyada ee loo qorsheeyay 'sida qarsoodi ah ee suurta galka ah'. Markaas ayaa la dhihi karaa in warbaahinta kale ay ka caawisay “kooxaha argaggixisada” macluumaad si ay sidaas u sameeyaan sax waxay awoodeen inay fuliyaan weeraro halka qof walba uu mooday inay tahay layli.
Booliis iyo ciidan xitaa (markay tahay fal been abuur ah, oo loo malaynayo inay run yihiin; calanka beenta ah) sidaa darteed waxay dhahaan kuwa runta raadinaya kamaradooda kaararkoodana wadaagaya macluumaadka (arag wicitaankii Dammegard ee filimka wax walba), kooxaha argaggixisada waxbadan ayey caawinayeen, taas oo caqabad ku aheyd shaqadooda.
Sow may ahayn jimicsi argaggixiso weyn oo sidan oo kale ah 911? Xitaa markaa ka dib waxaa jiray layliyo waaweyn oo ka socday hay'adda amniga hawada ee NORAD; kuwaas oo isku dubbarida hawadda hawada haddii ay dhacaan weeraro argagixiso. Sidaa darteed waa aasaasi laban laabo oo macquul ah in warbaahinta kale loogu magacaabi karo inay si wada jir ah mas'uul uga tahay haddii la qaado mowjad argaggixiso berri iyo maalinta dambe. Marka warbaahinta kale iyo muuqaalkeedii hore ee ku saabsan layliyada argaggixisada runtiina waa mid laga wada shaqeeyo
Muuqaalkee ay noqon doontaa; (1) Ole Dammegard wuxuu noqonayaa hogaamiyaha cusub ee dhaqdhaqaaqa runta isagoo ah shabakad amni oo xoog badan of (2) wuxuu qayb ahaan mas'uul ka yahay fulinta dhabta ah ee falalka argaggixisada taariikhihii ay ahayd inuu iftiiminayo, haddii loo baahdo, waa aag kafeega. Sikastaba, waa in la arkaa haddii jimicsiyada ama wax kasta oo (calanka beenta ah) ay dhici doonaan. Waxay, si kastaba ha noqotee, waxay la jaanqaadi doontaa rajada laga qabo mowjadaha argagixisada been abuurka ah ee horay looga soo sheegay goobta. Yurub waxay u isticmaali kartaa laati karootiga rabshadaha waaweyn ee qorshaysan. Xaqiiqdii xilligan Brexit hadda ugu dambeyntii wuxuu umuuqdaa inuu ku dhammaan doono dood. Waxay rabaan wax aan ka aheyn fowdo; ee 'Ordo ab Chao'.
Dammegard ayaa markaa suurta gal ah inuu asaaska u dhigo mamnuucid buuxda bogagga kale iyo filimka bilayska, ciidamada iyo 'shaqaalaha gargaarka'.
Waqtiga la joogo ma jiro wax calaamad u ah weerar ama layliyada argaggixisada. Dammegard doorkiisii ​​markaa wuu ka yara yaraa sidii aan ku soo qaatay isaga, waxayna isla qaateen isla taatikadii hore. Ma uusan noqon geesi weyn, asaga iyo taageerayaashiisaba lama noqon saaxiibo caawiya argagaxisada iyagoo duubay booliis iyo ciidan. Maya, wuxuu noqday nin mar kale carqaladeyn kara kalsoonida warbaahinta kale. Mar labaad ayaan leeyahay, maxaa yeelay kani wuxuu horay u dhacay isagoo aan garanaynin saaxiibkiisii ​​weynaa 'Zen Gardner' xubin ahaan iyo hoggaamiye kooxeedyada carruurta Ilaah sannado badan; diin ku dhiirigelisa galmada carruurta. Ole Dammegard ayaa mar hore la cadeeyay inuu yahay shilin hadana hada taas ayuu cadeeyay. Tani waa mid ka mid xeeladaha amniga ee adeegyada. Waxay soo bandhigayaan boodhadhkooda kuwaasoo lagu xayeysiinayo meelkasta iyagoo adeegsanaya websaydhyada kale (oo iyagana iskood isu maamula). Ka dib waxay wax ku afuufayaan fadeexad weyn. Waxaan ku sharaxay hawshan maqaalado badan oo hore. Aniga dacwadayda ayaan sii wadaa.
Isweydii, dadka sida Ole Dammegard waxay sii wadaan inay ku dhawaaqaan kala badh runta sida aragtiyaha shirqoolka. Waa inay ceebeeyaan fikirka xasaasiga ah iyagoo marka hore urursada taageerayaal badan ka dibna waxyaabo ceeb ah geliya. Zen Gardner sidoo kale si fudud ayaa loo hayaa. Dadku waxay jecel yihiin Willem Felderhof (Open Mind Conference) iyo Ole Dammegard waxay ku faraxsan yihiin inay ka qaybqaataan, laakiin sidoo kale goobo ay ka mid yihiin Ella Ster. Ka fogaanshaha shilalkaas waa taladayda.
Taariikhda Daabacaadda maqaalka asalka ah: 22 Oktoobar 2019 16: 47
Ololaha casaan ee 'filinka shilalka' hab caqli gal ah oo lagu mamnuucayo 'filimaanta xadgudubka booliiska'?
Strasbourg argagixisada argagixisada iyo argagixisada ajaanibta ah ayaa u muuqda inay si fiican ujecel yihiin (soo dhawow Eurogendfor)
'Argagixisadu waa hayaha' AATD
Tags: 5, Barcelona, dhibaatada, been ah, featured, calanka, warshad tamarta nukliyeerka, london, Manchester, NORAD, jimicsi, Ole Dammegard, hawlgalka, Paris, Rotterdam, Gorgorka badda, xal, magaalooyinka, argagixiso, weerarro argagixiso, calanka been ah, shan, Iswiidhan
22 October 2019 ee 17: 25
"Maxaan sameyn karaa?" Marka ha raacin talada Dammegard oo si gaar ah uga fogow meelaha wax lagu cuno oo iibsado xoogaa gasacadaysan iyo biyo cabitaan dhowr toddobaadyo.
Marka ha u maleynin inaad ku guuleysan karto guul weyn oo filim soo saar ah. Taasi waa dabin loo maro xaqiijinta mamnuucida taasi. Marka taladaydu waxay tahay: ha dhagaysan dumarkan awoodda Ole Dammegard.
22 October 2019 ee 18: 16
Kuwa runta raadinaya ayaa dhawaan noqon doona (mahadi haysa - falalka sirdoonka - Ole Dammegard) argagixisada cusub. Waxay ka caawiyeen kooxaha argaggixisada inay helaan macluumaad iyagoo soo keenaya taariikho jimicsi iyo goobo ay leeyihiin waxayna dadka u direen wadada si ay ugu sawiraan booliiska iyo ciidanka (u ogolaanaya argagixisada inay markale ka jawaabaan).
22 October 2019 ee 18: 02
Grapperhaus ma sugi karo ...
22 October 2019 ee 18: 42
Halkan ma ka maqlaa "wuxuu noqonayaa Inofizielle Mitarbeiter"? Waxay dib u xasuusineysaa waxoogaa xilli DDR ah ..
Muuqaalkaas ka yimid Grappermaker wuxuu sidoo kale si xoog leh ii xasuusinayaa marxalad cayiman, laakiin waxaan noqon doonaa lix iyo rubuc khalad.
22 October 2019 ee 19: 40
sababta ay waxyaalaha sidan u adkeyn karaan, u bixi Herr Oberst iyo wasiirkiisaiumium für Staatssicherheit gacan haye ... maxaa yeelay si wadajir ah ayaan u xooganahay
3 November 2019 ee 17: 03
Waxaan ka badbadinaynaa xoogaa salmon iyo martin hadda… Booliis gobolka hahaha
22 October 2019 ee 21: 33
Ka fiiri sumadda dhinaca midig ee fiidiyowga Ole. Maxaad calaamadaha badan u muujineysaa markaad runtii naftaada ku dhawaaqeyso inaad tahay nin raadis ah. Haddaba miyaa loo baahan yahay in shaki la abuuro?
22 October 2019 ee 22: 37
Si sax ah dadka loo yaqaan 'marcos dadka sumadda' astaamaha, waa aasaaska fariinta bilowga.
Laakiin sababta, tusaale ahaan, Ella ster ama u dooneysay inaan ogaanin inuu faafiyo filimka 'MartinVrijland' ee boggooda intarnetka Pegida hoax, laakiin yeeydaas oo ku jirta dharka Olle damnguard.
Waa maxay sababta caddaynta Martin Vrijland aan weligood si dhab ah loogu qaadin OM, sababta? sababtoo ah blogger lama hubin, sidaa darteed dadku.
Dammgard wuxuu ku hadlayaa ama garaacaa weligiisna waligiis ma taageerin wax walboo culus ah. Wax walba waa calan been ah halka 80 uu yahay% hoex. Dadka sida Olle Dammgard xitaa waa kuwa ugu xun, khaa'imiintu waxay ku hoosjiraan dhulka hoostiisa (dhaqdhaqaaqa iska caabbinta) inay sidaas oo kale dhigaan, askariga oo wata dharkayaga labbiska dushiisa. toogasho.
Dheh isku mid sida mucaaradka xakameynaya WantToKnow, EllaStar, Niburu.co iyo dhowr.
Waa pawn sida Icke oo aan la faafin. Haddii aad samayso bayaan aad uxun oo ku saabsan CIA iyo in ka badan waxaad filaysaa dib-u-dhac, waxaad u maleyn doontaa, maya, maya Olle, Olle way iska sii socon kartaa waxayna sii hayn kartaa sumcadda kacsan ee kacsan, khiyaanada sifiican loo tuuray waxaad ugu yeeraysaa dadka sida Olle Dammguard. , Peck leh baalal badan, oo aan dhagaysanayn
22 October 2019 ee 22: 50
Dad badan aqbali mayso in qof sida muuqata u muujiya wadahadalada "qotada dheer" ee ku saabsan PsyOps iyo "Dhibaatada, Falcelinta, Xalka" lafteeda ay noqon karto awood xoog badan.
Sababtaas awgeed waa inaad aragtaa in awoodda xukunku ogtahay inaad ku qaban karto mucaaradka kaliya qabashadeeda haddii aad adigu madax u magacowdo hogaamiyaha mucaaradka adigu.
Mudaaharaadka noocaas ah ee mucaaradka ahi wuxuu u eg yahay qabyaalad qaadaysa isla midab iyo dhadhan sida dadka runtii si xor ah u fikiraya. Taasi waxay aniga igu adkaynaysaa aniga, maxaa yeelay qof jecel Dammegard, laakiin sidoo kale Robert Jensen wuxuu isku dayaa inuu nuqulo saxda ah ee aan keeno. Kaliya boggayga ayaa la dumin karaa, meel kasta ayaa la faaqidayaa oo awood baa la siinayaa. Dhanka kale, waxay helayaan feejignaan buuxda.
Xeelad aad u xeel dheer oo caqli badan.
22 October 2019 ee 22: 58
Si aad ah loo safeeyay, cilmu-nafsiga tiro badan wuxuu socday muddo tobanaan sano ah, laga yaabee inuu u shaqeynayo shacabka, laakiin maahan qof walba, oo wuxuu noqonayaa mid aad u badan.
22 October 2019 ee 23: 39
Jid ahaan, xandernieuws waa la hilmaamay, wargeyskii telefishanka-semi ama mucaaradka aadka loo xukumay sida kuwo kale oo badan.
Waxay u muuqataa in dhammaan shabakadahaas inay waajib ku tahay inay si wada jir ah u wadaagaan wararka Olle Dammegard. Aad bey noogu liidato waxaas oo dhan oo aysan ugu dambeyn roobka roobka. Malaha taasi way imaan doontaa, "weerarka radar", waa inaad xubin ka noqotaa Xandernieuws ama Telegraaf ama ellastar
Marka waa in gambaleelka qaylo-dhaantu joogaa.
Sababtoo ah u malaynayaa in Ole uu sax noqon doono, ka dibna uu ku jiro shirqoolka, malaynayaa inuusan sax ahayn markaa waxa loogu yeedho kicinta ama cabsi gelinta, salaan dhamaan warbaahinta kale, laakiin Ole hoos ayuu u dhici doonaa
inta soo hartayna waa sii soconayaan maxaa yeelay iyagu waa khafiif.
Cilmu-nafsi Mass ee dadkii kacsanaa
22 October 2019 ee 23: 44
Waa hagaag .. De Telegraaf wuxuu ciyaaraa doorka ugu weyn PsyOp iyo websaydhyada mucaaradka ee la xakameeyay waxay door ka ciyaaraan shabagyada amniga.
Marokane nabdoon oo kor u qaada midabka Vrijland sida chameleons.
Faafreebka Facebook iyo warbaahinta kale ee bulshada ayaa sameeya inta soo hartay. Goobaha kale ee la xakameeyo ayaa kaliya riixaya tuugada badbaadada waxayna aamusiyaan Vrijland illaa dhimashada.
Marka laga reebo Xander ... sababta oo ah hada isku xirka Geenstijl iyo Jensen waa in si dhakhso leh loo sameeyaa, maxaa yeelay marwalba waan kashifayaa goobahaas 2.
23 October 2019 ee 05: 33
Waan fahmay oo aad ayaan u fahmay waxa aad ku sharaxday kor. Si kastaba ha noqotee, waxa wali igu mashquuliya waa su'aasha ah sababta ay goobtani u isticmaasho astaamaha caanka ah. Tirada dadka ku dhex arima calaamaddan ayaa sii kordhaysa, marka maxaa loo adeegsanayaa taatikadaani. Waa maxay fikirkaaga ka dambeeya arrintan?
23 October 2019 ee 07: 14
Waxaan sidoo kale ogaaday in Martin Vrijland lagu sheegay neefta oo kale sida Jensen oo aan lahayn qaab. Xaqiiqdi waxay u maleynayaan in qof walba uu ixtiraam u hayo oo uusan ka gaarin.
Waxay sidoo kale igu dhufatay in jawaabihii ka dhexeeyey xandernieuws, tusaale ahaan, ay jiraan jawaabihii fahmay xaaladda dhabta ah. Hadda saliid yar ayaa la ridayaa, laakiin tartiib tartiib ayey u weynaaneysaa oo weynaaneysaa. Way qabsan karaan waxay doonayaan laakiin goor hore ayey ahayd.
Runtu horaba way guuleysatay.
22 October 2019 ee 22: 21
Ole ma ka aqriyi lahayd websaydhkan? Daqiiqaddii 14: 21 wuxuu dhahay, "Waxay ku saleysan tahay Dhibaatadii hore, Falcelin, Xal." Oo sidan ayey dhowr jeer ku celcelisay.
Waxaan ka bilaabi karnaa codeynta halkaan. Xaaladdee uu muujiyey Martin yaa rumayn doona? 😉
Shakhsi ahaan, waxaan u maleynayaa in seenyada 2 intiisa badan la doonayo qoraalka. Koox ballaadhan ayaa laga saaray ciyaar hal mar ah. Tixraac ayaa si isa soo taraya loogu sameeyaa warbaahinta kale ee siyaasada iyo warbaahinta guud ee baahisa. Waa daqiiqad "quruxsan" oo lagu beddelayo warbaahinta kale kaydkiisa.
Laakiin haddii arrimuhu u socdaan sidii loo qorsheeyay, seenyada 1 dabcan waa qorshe gurmad oo fiican. Tan darteed, weerarada la saadaaliyay xitaa ma ahan inay dhacaan. Hadeysan wax dhicin, markaas Ole si toos ah ayaa loogu sarreeyaa wanaaga wax wada og.
23 October 2019 ee 04: 21
Sow caqli ma leh in filimka wax walba la duubo oo aan la soo bixin tan. Sug ilaa dhamaan baaritaanada la soo gabagabeeyo ka dibna ku dheji khadka, si laga yaabee in sheekada rasmiga ah aan laga faa'iideysan?
23 October 2019 ee 08: 32
Maya, maxaa yeelay muranka ayaa loo adeegsadaa in argaggixisadu (haddii wax dhacaan) ay marin u leeyihiin xogta weyn .. ama: xogta laga soo uruurin karo taleefannada iyada oo loo marayo rukhsadda sirta ah (ka dib markii lagu rakibay barnaamijyada).
Si kale haddii loo dhigo: barnaamijyada badankood waxay kuu oggolaadaan inaad gasho kaydintaada maxalliga ah oo aad u aragto xogtaas, markaa adeegayaasha xogta weyn ayaa had iyo goor leh sawirradaada iyo fiidyowyadaada.
Haddii "argaggixisadu" ay marin u heli karaan xogtaas weyn (kombuyuutarrada jabsiga), waxay lahaan doonaan sawiradaada iyo fiidyowyadaada.
23 October 2019 ee 05: 40
23 October 2019 ee 08: 48
Ole si xoogan ayaa loo weeraraa..aldus Ole. Waa shaqadiisa inuu caadi ka dhigo arintaas. Marka la soo koobo, kuwa runta doonaya waxay caadeysteen in lagu xakameeyo Dammegard.
Dabcan qaar badan ayaa ka daba ordaya shabaqa badbaadadan, laakiin aniga lafteedu way iga adag tahay.
Isaga oo ah maamule wanaagsan, Ole Dammegard wuxuu kaloo adeegsan doonaa qoraalkaas.
23 October 2019 ee 08: 49
Alfred Lambremont Webre ... mucaarad kale oo cajiib ah oo la xakameeyay oo pawn ah
23 October 2019 ee 08: 58
Ole wuu ku dhex socon karaa baabuur-qaali ah oo qaali ah wuxuuna la kulmi karaa waxyaabaha adventures ee ugu layaabka badan.
Doorkiisa: u bartay dulmiga (iyo gaar ahaan 'cabso' .. maxaa yeelay qof walba dabcan geesi ahaantiis uma ahan).
23 October 2019 ee 09: 42
Hey Ole! Ma laga yaabaa in ujeeddadaadu tahay inaad mar hore aasaaska u dhigto sharciyo cusub oo mamnuucaya shirarka yaryar fasax la'aan?
Ellie ayaa qoray:
23 October 2019 ee 06: 05
Haddii loo maleeyo inay sax tahay in Ole yahay mucaarad la xakameeyo. Miyuu taas u ogyahay laftiisa? Miyuu yahay qayb miyir leh oo ka mid ah gobolka qoto dheer mise isaga laftiisa ayaa ah dhibbane lagula kacay?
23 October 2019 ee 08: 43
Isagu uma eka inuu yahay qof dhibban sidaad u malaynaysaa? Waa inaad indhaha uun iska fiirisaa.
23 October 2019 ee 10: 54
Ciyaartu hadda ma bilaabmaysaa?
23 October 2019 ee 17: 13
Dad badan oo u haysta in Ole Dammegard uu yahay hanti CIA:
23 October 2019 ee 22: 32
Waa hagaag waxay ahayd maalin argagax leh oo argagax leh Ole!
Markaa shill wuxuu dhex dhacay dambiisha
Ka takhalus..serve..ma dib u soo laabato!
23 October 2019 ee 22: 33
24 October 2019 ee 12: 17
Kaliya tirada lambarka 39. (Ole)
24 October 2019 ee 16: 33
Iyo Pauw, dabcan, xakamayn dheeri ah ayaa isla markiiba laga wada hadlay shalay .. iyagoo raacaya maydadka 39 ee gaari xamuul ..
24 October 2019 ee 16: 35
Meydadka 39 ayaan la mid ahayn weerarada 39, laakiin isla markiiba waan ogaaday ..
25 October 2019 ee 19: 25
30 October 2019 ee 05: 54
30 October 2019 ee 12: 31
Wanaagsan! Waanu ka hortagnay Thanks Ole!
Sii wad Ole!
Thanks to Ole, NATO waxay si deg deg ah isugu soo duubtay inay baabi'iso calanka beenta ah!
Wow WauW WauWW !!! Ole waa nin geesi ah!
Cufnaan ballaaran !!
"Kulamada deg-degga ah ee Brussels!" Dameerkeyga
1 November 2019 ee 00: 09
Intee in le'eg ayay farsamooyinka sumadda iyo / ama NLP-ga tegi doonaan fiidiyowyada noocaas ah?
Waxaan weydiisanayaa taas maxaa yeelay waxaan arkay inay ku mashquuleen khafiifka Ole ee i xusuusiya maqaarka masaska. Waxaan sidoo kale ku arkay aragtida Ole fiidiyowgan. Isagu aad ayuu isugu dhow yahay oo hoos ayuu u eegaa dhagaystayaasha.
1 November 2019 ee 00: 59
kuwaasi waa farsamooyinka aan la-socodsiin ee la isticmaalo
30 October 2019 ee 06: 09
Cusbooneysiinta kor ku xusan, Daqiiqadaha 33.39 halkan shaashadda, dadka madadaalo.
« 'The greatfake' ghost ghost 'PsyOp oo ah ka qaadista xorriyaddaada oo dhan iyo hordhaca' booliiska fikirka '(qaybta 3)
Dilkii labalaha ahaa ee Gina iyo Marinus ee ka dhacay shineemada Pathé Groningen »
Guud ahaan Wadarta: 13.751.451